အမျိုးသမီးများအတွက်ခါးအနိမ့်ချွတ်ထားသောအ ၀ တ်အစားပါဂျင်းဘောင်းဘီ - အခမဲ့ရေယာဉ်နှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အမျိုးသမီး ၀ တ်ခါးတွင်အကျီင်္ချွတ်ထားသောယောက်ျားလေးဂျင်းဘောင်းဘီ
အပြာရင့် / XL အပြာနုရောင် / S အပြာနု / L အပြာရင့် / M
အမျိုးသမီး ၀ တ်အမြင့်ခါးတွင်ချည်ထားသောယောက်ျားလေးဂျင်းဘောင်းဘီ - အပြာရောင် / XL backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အလှဆင်: အရောင်ချွတ်, အဝတ်လျှော်
ပုံစံ: Classic မြင့်ခါးဂျင်းဘောင်းဘီ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် Boyfriend ဂျင်းဘောင်းဘီ
(၃) ပေါင်အကျယ် 57.8 60 62.2 64.4
မှတ်ချက်။ အရွယ်အစားရွေးချယ်ရန်အရွယ်အစားဇယားကွက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ သင်၏အလေ့အထအရတိုက်ရိုက်မရွေးချယ်ပါနှင့်။ အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေချာဘူးလား။ သင်၏တာ ၀ န်၊ ခါးနှင့်တင်ပါးဆုံရိုးတို့၏တိုင်းတာမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုပါသည်။ လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့်အရွယ်အစားမှာ 2-3cm ခြားနားနိုင်သည် သင်တိုင်းတာသည့်အခါသတိပြုပါ
160смростнаджинсы, отличные, оченьдлинные ကျွန်ုပ်၏အရွယ်အစား: талия 67, ဆင်းရဲသူ 94. Пришлибыстро။ Джинснеоченьплотный, летний။
စူပါချစ်စရာနှင့်လွယ်ကူသောဂျင်းဘောင်းဘီများနှင့်လည်းအစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း! ရိုးရှင်းသောကောက်ပဲသီးနှံများအပေါ်တွင်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်0သို့မဟုတ် 2, (25 "ခါးကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် S ပြီးပြည့်စုံသောကိုက်ညီ။ def ဒီစတိုးကနေပိုပြီးဝယ်ကြလိမ့်မည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
သမီးများကြိုက်သည်၊ ပိုကြီးသည့်အရွယ်အစားအတွက်အထူးယူကြသည်၊ ကလေးကိုမေးသည်၊ အဝတ်အထည်အရည်အသွေး၊ ဂျင်းဘောင်းဘီတို၊ နွေရာသီ၊
ငါ ၁၀၁% ကျေနပ်တယ် ငါသူတို့perfectlyုံ fit သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားတယ်။
ငါ ၅'၄ ပေါ့၊ ၁၀၅ ပေါင်အလေးချိန်ရှိတယ်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ကြီးလွန်းသည်၊ သို့သော်သင့်၏အကြည့်ကိုကြည့်လိုလျှင်၎င်းသည်စုံလင်လိမ့်မည်။